Iindaba Manufacturers & Suppliers | China News Factory
Ngaba ngokukhetha iingxowa iphakheji iimveliso zenu? Mhlawumbi ingqalelo okwakhiwa iingxowa iphepha ukupakisha, iphepha okwakhiwa iingxowa self-uphawu eyaziwa ngokuba iingxowa inkqubo iphepha uziphu, zayo non-ityhefu, nasongo, ungcoliseko-free, ngokungqinelana nemigangatho yesizwe ephathelele kokusingqongileyo, nangamandla phezulu, Enviro phezulu .. .
Ngokubanzi, Isingxobo sopakisho edityanisiweyo sele ebomini bethu zibe phantse, inkoliso emarikeni ukusetyenziswa kweengxowa zokubopha bottom ikhiwa oyintlanganisela kwi yangoku. Ngoko ke zintoni eziluncedo yalo olugqibeleleyo iingxowa caba ukuphakheja ezantsi? Siya kukuxelela ngongoma zilandelayo malunga packin flat bottom ...
Kuthetha ukuthini amathathu ingxowa icala, kukuba Ingxhowa welding kumacala ezintathu. Elinye icala aya kuhlala ejongile ngexesha imveliso. Ngale ndlela, abathengi angenza iimveliso zazo kwiingxowa, uze usebenzise uphawu ubushushu ukubuphelisa yokuvulwa bhegi. Kwiimeko ezininzi, ezincamathelayo sopakisho efunekayo ibhegi ezintathu-kabini ...
Yima up yakutya lisetyenziswa kubomi bethu bemihla ngemihla. Sinako ukubona ukutya ezininzi ezifana ikofu, amandongomane, lokutya, inyama jery, amandla protein, umgubo ngeembambo yi stand up yakutya ne uziphu. Ngoko ke namhlanje, siya ukubhala eli nqaku ukwazisa kuma up yakutya. Okokuqala sithethe ngalo mbandela. Uhlobo lokuqala okwakhiwa stand up pou ...
Izingxobo gusset Side ngokuya kuthandwa kwizicelo ezininzi kuluhlu olubanzi mveliso. izinto zabo eziluqilima kunceda wandise ubomi ezikhabhathini ngokuqinisekisa imveliso uhlala etywiniweyo ngokukhuselekileyo kwaye luza kukhuselwe. iibhegi zethu gusset icala zisetyenziswa kakhulu ngokubanzi ekupakisheni okulula nokutya ezomileyo ezifana nati, ...
Coffee bean na isiselo eqhelekileyo kubomi bemihla ngemihla. Abantu bayathanda ukuba usele ikofu xa usebenza nabantu udiniwe, abakhethekileyo abavela Country yasentshona. Coffee yakutya isetyenziselwa ukugcina ikofu yembotyi ixesha elide. Namhlanje, siza kwazisa ikofu bean ukuphakheja. Into yokuqala, sithetha ngalo mbandela. Kukho ngaye ezimbini ...
Clear Yimani Up Pouches , Yima Up Plastic ingxowa Packaging , Yimani Up ingxowa Packaging , okwakhiwa Iphepha Resealable Bags , Yima Up Bags yakutya , Clear Plastic Yimani Up Pouches ,